“ ညဆိုး ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် - စဆုံး ) - Real Gaming Myanmar
“ ညဆိုး ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် – စဆုံး )
By ei zon /5months ago / Uncategorized / No Comments
 ည မ ဖ တ် ရ
( အမှန် တကယ်ကြုံခဲ့သော သူများ နေရာမှ ခံစား၍ ရေးသည်။ )
“ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကို မှ မပုတ်ခတ်လိုကြောင်း ၊ စာတစ်ပုဒ်အဖြစ်သာမြင်ပေးပါရန် ဦးစွာပထမ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ”
“ ၀ါသနာအရရေးသားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အမှားအယွင်းရှိပါက ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါသည် ။ ဝေဖန်မှုများကို ကြိုဆိုပါသည် ။  ”
ပရလောကဆိုတာ လူတွေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမှာတည်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မ အဲ့ဒီနေ့ညက ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ လက်ခံသွားခဲ့ပါပြီ ။
ခေတ်ပျက်ကြီး တစ်ခု ၊ သွေးသောက်သော ခုနှစ် ၁၉၈၈ ။ သေလိုက်တဲ့ လူတွေ ၊ နေရာတိုင်းမှာ ဆာလောင်နေတဲ့ ၀ိညဉ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန် အခါ ။
ကျွန်မတို့နေထိုင်ရာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ( …. ) ရပ်ကွက် မှာ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ အရပ်သားအချို့ ပရိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေချိန် ၊ ကြားနေပြည်သူတွေ သောကအရောက်ရဆုံးကာလတစ်ခု ။ ကျောင်းတွေ ၊ရုံးတွေ ၊ အလုပ်တွေ အကုန်ပိတ်ထားကြသည် ။ လူတိုင်းကိုယ်စီ အိမ်ထဲမှာပဲ ငြိမ်သက်စွာနေကြရသည် ။ ရပ်ကွက်တိုင်း ၀ါးကပ်တွေနဲ့ ခြံစည်းရိုးကာထားကြသည် ။
လူငယ် လူရွယ်များ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကိုယ် တုတ် ၊ ဓား ၊ လက်နက်ကိုယ်စီ ဖြင့် အလှည့်ကျကင်းစောင့်ကြရသည် ။ ဆူပူမှုတွေက အဆက်မပြတ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် ၊ ကြားရတဲ့သတင်းတွေက ဟော့ ဟိုနေရာမှာ အပစ်ခံရလို့ ဘယ်ကျောင်းက အသက်ဘယ်လောက် ကျောင်းသူလေးသေသွားပြီ ။ ဘယ်ရဲစခန်းက ဘယ်သူတွေကတော့ ခေါင်းဖြတ်ခံရပြန်ပြီ ၊ ဘယ်သူတွေကဖြင့် အရှင်လက်လက် မီးရှို့ခံနေပြီ ။
စသဖြင့် အန္နိဌာရုံ သတင်းတွေချည်းသာ ဆက်တိုက်ကြားနေရသည် ။ တောမီးလောင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ် ဆိုသလို လူဆိုးလူပေတွေ ၊ အခွင့်အရေးသမားတွေက အဖွဲ့လိုက် အိမ်ပေါ်တက် လူသတ် လုယက်မှုတွေက ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်နေသဖြင့် ရပ်ကွက်ကင်းသမားတွေက သူစိမ်းဆိုပါက ရပ်ကွက်အတွင်း လုံးဝပေးမ၀င် ။
နေ့စဉ်လိုလိုပင် နံနက်ခင်း ကို ခေါင်းပျက်ကြီးများကို ၀ါးလုံးဖြင့်ထိုးကာ ရပ်ကွက်အတွင်း လှည့်လည်ပြသခြင်းများ ၊ စစ်တပ်က ပစ်သတ်လိုက်သဖြင့် သေသူများအလောင်းကို ၀ါးကပ်ဖြင့်တင်ကာ လှည့်လည်ပြသခြင်း ၊ စသော သွေးပျက်ဖွယ် မြင်ကွင်းများ ဖြင့်စတင်နေချိန် ဖြစ်သည် ။
တစ်နေ့မှာ တပ်မတော် ကတပ်စုတစ်စုက တပ်သားတွေ နယ်မြေထိန်းသိမ်းဖို့ချီတက်လာချိန် တစ်ဖက်ကလည်း တပ်မတော်နှင့် စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သော လူတစ်စုထိပ်တိုက်တွေ့နေချိန် တပ်မတော်က ထိုလူအုပ်ကို ရှေ့မတိုးဖို့ပြောပြီး သေနတ်များဖြင့်ချိန်ရွယ်ထားတုန်းမှာ
ကျွန်မတို့နေထိုင်ရာ ( …. )ဈေး မှ ငါး ရောင်းသူတစ်ယောက်က အက်ရှင်ကားတွေထဲက Rambo လိုမျိုး ဓါးမြှောင်ကို ပါးစပ်ဖြင့်ကိုက် သံစည်ပိုင်းဖြင့်ကိုယ်လုံးကိုကာကွယ် စည်ပိုင်းကို တွန်းပြီး ရှေ့က စစ်သားတွေကို ခေါင်းထောင်ပြီး ကြည့်လိုက် စည်ပိုင်းကိုတွန်းလိုက် ရှေ့ဆက်သွားလိုက် ကြည့်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတုန်း စစ်တပ်က “ သူ့ကို မပစ်ချင်လို့ ” Warning နှစ်ခါပေးတယ် ။
ဆရာသမားက မရဘူး သူ့ကို မပစ်ရဲဘူးထင်ပြီး ဆက်တက်တယ် ဟိုဘက်ကလည်း နောက်ဆုံး Warning ပေးပြီး စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ ။
အဲ့အချိန်မှာ ဆရာသမားက စည်ပိုင်းကိုတွန်းပြီးဆက်တက်တာပေါ့ ပြီးတော့ စည်ပိုင်းအပေါ်ကနေ စစ်သားတွေဘက်ကို ချောင်းပြီးအကြည့် “ ဖုန်း ” ဆိုပြီးလှမ်းပစ်လိုက်တာ နှဖူးတည့်တည့်ပဲ နောက်စိပါပွင့်ထွက်သွားတယ် လမ်းပေါ်မှာ သွေးတွေ ဦးနှောက်တွေဆိုတာ မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဘူး ။
ခုနက လူအုပ်ကြီးလည်းပြေးလိုက်တာဆိုတာ တစ်ယောက်မှကိုရှာမရတော့ဘူး ။ ခဏအကြာ စစ်သားတွေပြန်သွားတော့ လူတစ်စုရောက်လာတယ်
ဘယ်သူကမြှောက်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး အဲ့ဒီအလောင်းကြီးကို စင်ကြီးနဲ့တင်ပြီး လမ်းတွေမှာ လှည့်ပတ်ပြီးပြနေတာ အဆိုးဝါးဆုံးမြင်ကွင်းပဲ ။
ပြီးတော့ တောင်ဥက္ကလာ နှင့် မြောက်ဒဂုံ ကြားက နေရာ ( ယခု ဘေလီတံတား ) ( အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဘေလီတံတားမရှိပါ ချောင်းစပ်ကြီးပေါ့ )
မှာ စင်ကြီးနဲ့ အဲ့ဒီအလောင်းကြီးကို ဒီတိုင်းပစ်ထားကြတယ် ၊ သဂြိုလ်မယ့်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး ၊ အလောင်းကြီးက ဒီအတိုင်းကြီး ။
( သေသူကို စော်ကားလိုစိတ်လုံးဝမရှိပါ စာအဖြစ်သာမြင်ပေးပါရန် ။ )
ခုနက လူအုပ်ကြီးလည်းပြေးလိုက်တာဆိုတာ တစ်ယောက်မှကိုရှာမရတော့ဘူး ။
ကျွန်မတို့အိမ်ရှေ့မှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ အဲ့မြင်ကွင်းကို အခုထိမမေ့သေးဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း သေချာပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့ ။
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ မှတ်မှတ်ရရ ညဘက်ကြီး ။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ မိုးကုတ်ကလာပြီးငှားနေကြတဲ့ မိသားစုက အမေဖြစ်သူ အဒေါ်ကြီးက ကျွန်မတို့လမ်းထိပ်ကဆိုင်က “ ခေါက်မုန့် ” တွေဝယ်လာပြီး ကျွန်မကို လာကျွေးတယ် အဲ့တုန်းက အိမ်မှာ အမေရယ် ကျွန်မရယ်ညီမလေးရယ်ပဲရှိတာ အဖေနဲ့ မောင်လေးက လမ်းထိပ်မှာ ကင်းစောင့်ပေးနေရတယ် ။
အချိန်က အပုပ်ချိန် ည ၁၁ နာရီကျော်လောက် ။
ကျွန်မလည်း အဒေါ်ကြီးလာပေးတဲ့ မုန့်ကိုစားရင်း အိမ်ငှားမိသားစုက ကျွန်မနဲ့ အသက်တူတဲ့ အမနဲ့ စကားထိုင်ပြောနေတာပေါ့ စကားပြောပြီး သူလည်းပြန်သွားတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခွေးတွေကလည်း အူလိုက်တာ ၊ ခွေးတွေက ညတိုင်းလိုလိုအူနေတက်တော့ ကျွန်မတို့အတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ ၊ ကျွန်မလဲသိပ်အရေးမစိုက်မိဘူး ။
အချိန်ကိုကြည့်တော့ ၁၂ နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်နေပြီ ကျန်တာကို ညီမလေးကို ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ အိမ်ပေါ်ထပ်က သူ့အခန်းဆီသွားကျွေးတာပေါ့ ။
သူက “ အမ သမီးမစားတော့ဘူး အိပ်တော့မယ် ” လို့ပြောတော့ ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီမုန့်ကို စားလိုတာပေါ့ ။ ပြီးတော့ အိပ်မယ်ဆိုပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲလိုက်တယ် ။ ( အဲ့ဒီနေ့ညက ကျွန်မ ဘုရားကန်တော့အိပ်ဖို့ မေ့ခဲ့တယ် ။ )
စပြီးအိပ်တာနဲ့ အချိန်ကိုက်ထားသလို ပုတ်စော်ကြီးကထောင်းကနည်းနံလာတယ် ။
ကျွန်မအိပ်တာက နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် တစ်ယောက်တည်းအိပ်တာဆိုတော့ တစ်ဖက်က လွတ်နေတာပေါ့ ။
ညှီစော်ကြီးကလဲနံ ၊ ပုပ်စော်ကလဲထောင်းခနဲ ထောင်းခနဲနံတာ ဆိုတာ ခေါင်းတွေပါမူးပြီး အော့အန်ချင်လာတယ် တစ်ခါမှ အဲ့ဒီလိုအပုပ်နံ့ မရဖူးဘူး ။
တစ်ခုခုဆိုတာသိလိုက်တယ် လူကလည်း သေအောင်ကြောက်လာတယ် ။ အသားတွေပါတုန်တယ် ချွေးစီးတွေဆို မြင်မကောင်းဘူး ၊ လှုပ်လည်းမလှုပ်ရဲဘူး ၊ ကျွန်မက ထောင့်ဘက်ကပ်အိပ်တာဆိုတော့ ကုတင်တစ်ဖက်က ကျောပေးထားသလိုဖြစ်နေတယ် ။
ကျွန်မဘေးက ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်လာအိပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မစိတ်ကခံစားလို့ရတယ် ။ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ပြန်ဆင်းသွားတာကိုလည်း ကျွန်မသိနေတယ် ကြောက်လိုက်တာ ဆိုတာ ပြောမနေနဲ့ ။ကျွန်မလည်းရသမျှဘုရားစာတွေကို စိတ်ထဲကနေအကုန်ရွတ်တာ ၊ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော် ကို ရွတ်ဖို့သတိမရဘူး ။
တော်တော်ကို ကြောက်စရာကောင်းတာ ၊ ကျွန်မလည်းသူကုတင်ပေါ်ပြန်တက်လာမှဆိုးလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ မျက်စိမဖွင့်ပဲ ကုတင်ကို ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်လိုက်တယ် ။
ပြီးတော့ မသိမသာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ မျက်လုံးက လုံးဝဖွင့်မရဘူး ၊ ဖွင့်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးဖွင့်ကြည့်တော့ ကုတင်ခြေရင်းမှာ “ မဲမဲကောင်ကြီး ”ကျွန်မကို သူ့မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတာ အမလေး အခုတောင် မျက်လုံးထဲပြန်မြင်တယ် ပြောရင်းပြောရင်းကြက်သီးထလိုက်တာ ။
ပြီးတော့ ကျွန်မအိပ်နေတဲ့ကုတင်က ကျွန်မမလှုပ်ပဲနဲ့ လူတစ်ယောက်လာထိုင်သလို အိကျသွားတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မကျောရိုးတစ်လျှောက် အေးစက်သွားပြီး ကြောက်လွန်းလို့ ချွေးတွေပြန်လာပြီး ကြက်သီတွေထလာတယ် ။ စိတ်ထဲက ဘုရားပဲတနေမိတယ် အနံကြီးကလည်းဆိုးဝါးလိုက်တာ လူသေကောင်တွေကြားထဲ ရောက်နေသလိုခံစားရတယ် ။
အဲ့ဒီအနံကြီးက ဘယ်အချိန်မှပျောက်သွားလည်းဆိုတော့ မနက် ( ၄ နာရီ ) ထိုး လမ်းထိပ်ကင်းတဲက သံချောင်းခေါက်သံကြားမှ လုံးဝ ပျောက်သွားတာ ။ နောက်ညတွေကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းမအိပ်ရဲတော့ဘူး ။ ညဆို ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ် အမျှအတန်းတွေဝေပြီးမှ အိပ်ရဲတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတယ် ။ ညီမလေးကို အခန်းထဲခေါ်သိပ်ရတယ် ။ ကျွန်မထင်တာ ညက ကျွန်မ အစားအသောက် ကို ညဘက်စားပြီးတော့ အခန်းထဲယူလာမိတာ စားချင်လို့ အပြင်ကလိုက်လာတာထင်တယ် ။
ဒါတောင် အသားမဟုတ်ဘူးနော် “ ရိုးရိုး ခေါက်မုန့်လေး ” ။ အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲ ကျွန်မကို မုန့်ဝယ်ကျွေးတဲ့ အန်တီကြီးက မနက်ကြတော့ ပြောပြတယ် ။
သူလည်းသရဲခြောက်ခံရတယ်တဲ့ ။ သူကကျွန်မထက်ဆိုးတယ် သူကကြမ်းခင်းမှာအိပ်တာလေ သူအိပ်တဲ့ခြေရင်းမှာ ပြော၇ရင် သူ့ခြေထောက်နားမှာပေါ့ “ ဒေါက် …. ဒေါက် …. ဒေါက် ” နဲ့ အသံတွေကြားလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ……….
“ သူ့ခြေထောက်နားမှာ ဘောလုံးလို အလုံးလေး သေးသေးလေးတဲ့ သေချာမျက်လုံးပွတ်ပြီးကြည့်တော့ လူခေါင်းကြီးတဲ့ ဆံပင်ကော မျက်နှာကောပါတဲ့
ခေါင်းသေးသေးလေး လှိမ့်နေတာ တဲ့ ”
သူ့မှာ တစ်ညလုံး မအိပ်ရဲဘူးတဲ့ မျက်လုံးကြီးမှိတ်ပြီး ဘုရားစာတွေရွတ် ၊ အော်လည်းမအော်ရဲ ၊ အိပ်ယာထဲ (ကန်တော့ပါ) ရှူ ရှူးပါ ထွက်ကျကုန်တယ်တဲ့ ၊ ကျွန်မလိုပဲ နံနက် ( ၄ နာရီ ) လောက်မှာ အသံတိတ်သွားလို့ကြည့်လိုက်တော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့ ။
လူကို ဘာမျှ အန္တရယ်မပြုသွားတာ ဘုရားစာရဲ့ တန်ခိုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါကကျွန်မ ယုံကြည်ချက်ပါ ။ အဲ့နေ့ကစပြီး ညဆို ဘယ်သူကျွေးကျွေး ဘာအစားအသောက်မှ မစားတော့ဘူး ၊ အိမ်လည်း မသယ်လာရဲတော့ဘူး ။
ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့သူ အခုအိပ်ပြီးဖတ်နေတာဆိုရင် ခြေရင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ ဘေးကိုမကြည့်ပါနဲ့ စောင်ကိုသေချာခြုံအိပ် အအေးမိမှာစိုးလို့ပါ 😛
ကြောက်တက်တယ်ဆို ညစဉ် မေတ္တာပို့ ၊ ဘုရားဝတ်ပြု ၊ အမျှအတန်းပေးဝေပြီးမှအိပ်ကြပါ ။
အချိန်ဘယ်လောက်မှမပေးရပါဘူး ကုသိုလ်လည်းရ အန္တာရယ်လည်းကင်းပါတယ် ။
အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ခင်ဗျာ ။
“ ညဆိုး ” ( ဖွဈရပျမှနျ – စဆုံး )
 ည မ ဖ တျ ရ
( အမှနျ တကယျကွုံခဲ့သော သူမြား နရောမှ ခံစား၍ ရေးသညျ။ )
“ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကို မှ မပုတျခတျလိုကွောငျး ၊ စာတဈပုဒျအဖွဈသာမွငျပေးပါရနျ ဦးစှာပထမ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ”
“ ဝါသနာအရရေးသားခွငျးဖွဈသောကွောငျ့ အမှားအယှငျးရှိပါက ခှငျ့လှတျပေးစလေိုပါသညျ ။ ဝဖေနျမှုမြားကို ကွိုဆိုပါသညျ ။  ”
ပရလောကဆိုတာ လူတှနေဲ့ အနီးကပျဆုံးမှာတညျရှိနတေယျ ဆိုတာကို ကြှနျမ အဲ့ဒီနညေ့က ဖွဈရပျကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျ နဲ့ လကျခံသှားခဲ့ပါပွီ ။
ခတျေပကျြကွီး တဈခု ၊ သှေးသောကျသော ခုနှဈ ၁၉၈၈ ။ သလေိုကျတဲ့ လူတှေ ၊ နရောတိုငျးမှာ ဆာလောငျနတေဲ့ ဝိညဉျတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့အခြိနျ အခါ ။
ကြှနျမတို့နထေိုငျရာ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ ( …. ) ရပျကှကျ မှာ တပျမတျောသားတှနေဲ့ အရပျသားအခြို့ ပရိပက်ခ ဖွဈပှားနခြေိနျ ၊ ကွားနပွေညျသူတှေ သောကအရောကျရဆုံးကာလတဈခု ။ ကြောငျးတှေ ၊ရုံးတှေ ၊ အလုပျတှေ အကုနျပိတျထားကွသညျ ။ လူတိုငျးကိုယျစီ အိမျထဲမှာပဲ ငွိမျသကျစှာနကွေရသညျ ။ ရပျကှကျတိုငျး ဝါးကပျတှနေဲ့ ခွံစညျးရိုးကာထားကွသညျ ။
လူငယျ လူရှယျမြား ကိုယျ့ရပျကှကျကိုယျ တုတျ ၊ ဓား ၊ လကျနကျကိုယျစီ ဖွငျ့ အလှညျ့ကကြငျးစောငျ့ကွရသညျ ။ ဆူပူမှုတှကေ အဆကျမပွတျကိုဖွဈပျေါနပေါတယျ ၊ ကွားရတဲ့သတငျးတှကေ ဟော့ ဟိုနရောမှာ အပဈခံရလို့ ဘယျကြောငျးက အသကျဘယျလောကျ ကြောငျးသူလေးသသှေားပွီ ။ ဘယျရဲစခနျးက ဘယျသူတှကေတော့ ခေါငျးဖွတျခံရပွနျပွီ ၊ ဘယျသူတှကေဖွငျ့ အရှငျလကျလကျ မီးရှို့ခံနပွေီ ။
စသဖွငျ့ အန်နိဌာရုံ သတငျးတှခေညျြးသာ ဆကျတိုကျကွားနရေသညျ ။ တောမီးလောငျ တောကွောငျလကျခမောငျးခတျ ဆိုသလို လူဆိုးလူပတှေေ ၊ အခှငျ့အရေးသမားတှကေ အဖှဲ့လိုကျ အိမျပျေါတကျ လူသတျ လုယကျမှုတှကေ ဆကျတိုကျဆိုသလိုဖွဈနသေဖွငျ့ ရပျကှကျကငျးသမားတှကေ သူစိမျးဆိုပါက ရပျကှကျအတှငျး လုံးဝပေးမဝငျ ။
နစေ့ဉျလိုလိုပငျ နံနကျခငျး ကို ခေါငျးပကျြကွီးမြားကို ဝါးလုံးဖွငျ့ထိုးကာ ရပျကှကျအတှငျး လှညျ့လညျပွသခွငျးမြား ၊ စဈတပျက ပဈသတျလိုကျသဖွငျ့ သသေူမြားအလောငျးကို ဝါးကပျဖွငျ့တငျကာ လှညျ့လညျပွသခွငျး ၊ စသော သှေးပကျြဖှယျ မွငျကှငျးမြား ဖွငျ့စတငျနခြေိနျ ဖွဈသညျ ။
တဈနမှေ့ာ တပျမတျော ကတပျစုတဈစုက တပျသားတှေ နယျမွထေိနျးသိမျးဖို့ခြီတကျလာခြိနျ တဈဖကျကလညျး တပျမတျောနှငျ့ စိတျသဘောထားမတိုကျဆိုငျသော လူတဈစုထိပျတိုကျတှနေ့ခြေိနျ တပျမတျောက ထိုလူအုပျကို ရှမေ့တိုးဖို့ပွောပွီး သနေတျမြားဖွငျ့ခြိနျရှယျထားတုနျးမှာ
ကြှနျမတို့နထေိုငျရာ ( …. )ဈေး မှ ငါး ရောငျးသူတဈယောကျက အကျရှငျကားတှထေဲက Rambo လိုမြိုး ဓါးမွှောငျကို ပါးစပျဖွငျ့ကိုကျ သံစညျပိုငျးဖွငျ့ကိုယျလုံးကိုကာကှယျ စညျပိုငျးကို တှနျးပွီး ရှကေ့ စဈသားတှကေို ခေါငျးထောငျပွီး ကွညျ့လိုကျ စညျပိုငျးကိုတှနျးလိုကျ ရှဆေ့ကျသှားလိုကျ ကွညျ့လိုကျနဲ့ လုပျနတေုနျး စဈတပျက “ သူ့ကို မပဈခငျြလို့ ” Warning နှဈခါပေးတယျ ။
ဆရာသမားက မရဘူး သူ့ကို မပဈရဲဘူးထငျပွီး ဆကျတကျတယျ ဟိုဘကျကလညျး နောကျဆုံး Warning ပေးပွီး စောငျ့ကွညျ့နတောပေါ့ ။
အဲ့အခြိနျမှာ ဆရာသမားက စညျပိုငျးကိုတှနျးပွီးဆကျတကျတာပေါ့ ပွီးတော့ စညျပိုငျးအပျေါကနေ စဈသားတှဘေကျကို ခြောငျးပွီးအကွညျ့ “ ဖုနျး ” ဆိုပွီးလှမျးပဈလိုကျတာ နှဖူးတညျ့တညျ့ပဲ နောကျစိပါပှငျ့ထှကျသှားတယျ လမျးပျေါမှာ သှေးတှေ ဦးနှောကျတှဆေိုတာ မွငျမကောငျးရှုမကောငျးဘူး ။
ခုနက လူအုပျကွီးလညျးပွေးလိုကျတာဆိုတာ တဈယောကျမှကိုရှာမရတော့ဘူး ။ ခဏအကွာ စဈသားတှပွေနျသှားတော့ လူတဈစုရောကျလာတယျ
ဘယျသူကမွှောကျပေးလိုကျလဲမသိဘူး အဲ့ဒီအလောငျးကွီးကို စငျကွီးနဲ့တငျပွီး လမျးတှမှော လှညျ့ပတျပွီးပွနတော အဆိုးဝါးဆုံးမွငျကှငျးပဲ ။
ပွီးတော့ တောငျဥက်ကလာ နှငျ့ မွောကျဒဂုံ ကွားက နရော ( ယခု ဘလေီတံတား ) ( အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ဘလေီတံတားမရှိပါ ခြောငျးစပျကွီးပေါ့ )
မှာ စငျကွီးနဲ့ အဲ့ဒီအလောငျးကွီးကို ဒီတိုငျးပဈထားကွတယျ ၊ သဂွိုလျမယျ့သူတဈယောကျမှမရှိဘူး ၊ အလောငျးကွီးက ဒီအတိုငျးကွီး ။
( သသေူကို စျောကားလိုစိတျလုံးဝမရှိပါ စာအဖွဈသာမွငျပေးပါရနျ ။ )
ခုနက လူအုပျကွီးလညျးပွေးလိုကျတာဆိုတာ တဈယောကျမှကိုရှာမရတော့ဘူး ။
ကြှနျမတို့အိမျရှမှေ့ာဖွဈသှားတာဆိုတော့ အဲ့မွငျကှငျးကို အခုထိမမသေ့ေးဘူး ။ ဒါကွောငျ့လညျး သခြောပွနျပွောနိုငျတာပေါ့ ။
ဒီလိုအကွောငျးအရာတှဖွေဈပွီး နှဈရကျလောကျကွာတော့ မှတျမှတျရရ ညဘကျကွီး ။
ကြှနျမတို့အိမျမှာ မိုးကုတျကလာပွီးငှားနကွေတဲ့ မိသားစုက အမဖွေဈသူ အဒျေါကွီးက ကြှနျမတို့လမျးထိပျကဆိုငျက “ ခေါကျမုနျ့ ” တှဝေယျလာပွီး ကြှနျမကို လာကြှေးတယျ အဲ့တုနျးက အိမျမှာ အမရေယျ ကြှနျမရယျညီမလေးရယျပဲရှိတာ အဖနေဲ့ မောငျလေးက လမျးထိပျမှာ ကငျးစောငျ့ပေးနရေတယျ ။
အခြိနျက အပုပျခြိနျ ည ၁၁ နာရီကြျောလောကျ ။
ကြှနျမလညျး အဒျေါကွီးလာပေးတဲ့ မုနျ့ကိုစားရငျး အိမျငှားမိသားစုက ကြှနျမနဲ့ အသကျတူတဲ့ အမနဲ့ စကားထိုငျပွောနတောပေါ့ စကားပွောပွီး သူလညျးပွနျသှားတယျ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ခှေးတှကေလညျး အူလိုကျတာ ၊ ခှေးတှကေ ညတိုငျးလိုလိုအူနတေကျတော့ ကြှနျမတို့အတှကျ အထူးအဆနျးမဟုတျတော့ဘူးလေ ၊ ကြှနျမလဲသိပျအရေးမစိုကျမိဘူး ။
အခြိနျကိုကွညျ့တော့ ၁၂ နာရီဝနျးကငျြဖွဈနပွေီ ကနျြတာကို ညီမလေးကို ကြှေးမယျဆိုပွီးတော့ အိမျပျေါထပျက သူ့အခနျးဆီသှားကြှေးတာပေါ့ ။
သူက “ အမ သမီးမစားတော့ဘူး အိပျတော့မယျ ” လို့ပွောတော့ ကြှနျမလညျး အဲ့ဒီမုနျ့ကို စားလိုတာပေါ့ ။ ပွီးတော့ အိပျမယျဆိုပွီး ကုတငျပျေါလှဲလိုကျတယျ ။ ( အဲ့ဒီနညေ့က ကြှနျမ ဘုရားကနျတော့အိပျဖို့ မခေဲ့တယျ ။ )
စပွီးအိပျတာနဲ့ အခြိနျကိုကျထားသလို ပုတျစျောကွီးကထောငျးကနညျးနံလာတယျ ။
ကြှနျမအိပျတာက နှဈယောကျအိပျကုတငျ တဈယောကျတညျးအိပျတာဆိုတော့ တဈဖကျက လှတျနတောပေါ့ ။
ညှီစျောကွီးကလဲနံ ၊ ပုပျစျောကလဲထောငျးခနဲ ထောငျးခနဲနံတာ ဆိုတာ ခေါငျးတှပေါမူးပွီး အော့အနျခငျြလာတယျ တဈခါမှ အဲ့ဒီလိုအပုပျနံ့ မရဖူးဘူး ။
တဈခုခုဆိုတာသိလိုကျတယျ လူကလညျး သအေောငျကွောကျလာတယျ ။ အသားတှပေါတုနျတယျ ခြှေးစီးတှဆေို မွငျမကောငျးဘူး ၊ လှုပျလညျးမလှုပျရဲဘူး ၊ ကြှနျမက ထောငျ့ဘကျကပျအိပျတာဆိုတော့ ကုတငျတဈဖကျက ကြောပေးထားသလိုဖွဈနတေယျ ။
ကြှနျမဘေးက ကုတငျပျေါမှာ တဈယောကျယောကျလာအိပျနတေယျဆိုတာ ကြှနျမစိတျကခံစားလို့ရတယျ ။ ပွီးတော့ ကုတငျပျေါကနေ ပွနျဆငျးသှားတာကိုလညျး ကြှနျမသိနတေယျ ကွောကျလိုကျတာ ဆိုတာ ပွောမနနေဲ့ ။ကြှနျမလညျးရသမြှဘုရားစာတှကေို စိတျထဲကနအေကုနျရှတျတာ ၊ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျော ကို ရှတျဖို့သတိမရဘူး ။
တျောတျောကို ကွောကျစရာကောငျးတာ ၊ ကြှနျမလညျးသူကုတငျပျေါပွနျတကျလာမှဆိုးလို့ ကွောကျကွောကျနဲ့ မကျြစိမဖှငျ့ပဲ ကုတငျကို ကနျ့လနျ့ဖွတျ အိပျလိုကျတယျ ။
ပွီးတော့ မသိမသာ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တဲ့အခါ မကျြလုံးက လုံးဝဖှငျ့မရဘူး ၊ ဖှငျ့နိုငျသလောကျကွိုးစားပွီးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ကုတငျခွရေငျးမှာ “ မဲမဲကောငျကွီး ”ကြှနျမကို သူ့မကျြလုံးနီနီကွီးတှနေဲ့ လှမျးကွညျ့နတော အမလေး အခုတောငျ မကျြလုံးထဲပွနျမွငျတယျ ပွောရငျးပွောရငျးကွကျသီးထလိုကျတာ ။
ပွီးတော့ ကြှနျမအိပျနတေဲ့ကုတငျက ကြှနျမမလှုပျပဲနဲ့ လူတဈယောကျလာထိုငျသလို အိကသြှားတယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကြှနျမကြောရိုးတဈလြှောကျ အေးစကျသှားပွီး ကွောကျလှနျးလို့ ခြှေးတှပွေနျလာပွီး ကွကျသီတှထေလာတယျ ။ စိတျထဲက ဘုရားပဲတနမေိတယျ အနံကွီးကလညျးဆိုးဝါးလိုကျတာ လူသကေောငျတှကွေားထဲ ရောကျနသေလိုခံစားရတယျ ။
အဲ့ဒီအနံကွီးက ဘယျအခြိနျမှပြောကျသှားလညျးဆိုတော့ မနကျ ( ၄ နာရီ ) ထိုး လမျးထိပျကငျးတဲက သံခြောငျးခေါကျသံကွားမှ လုံးဝ ပြောကျသှားတာ ။ နောကျညတှကြှေနျမ တဈယောကျတညျးမအိပျရဲတော့ဘူး ။ ညဆို ပရိတျပဋ်ဌာနျးတှရှေတျ အမြှအတနျးတှဝေပွေီးမှ အိပျရဲတဲ့အကငျြ့ဖွဈသှားတယျ ။ ညီမလေးကို အခနျးထဲချေါသိပျရတယျ ။ ကြှနျမထငျတာ ညက ကြှနျမ အစားအသောကျ ကို ညဘကျစားပွီးတော့ အခနျးထဲယူလာမိတာ စားခငျြလို့ အပွငျကလိုကျလာတာထငျတယျ ။
ဒါတောငျ အသားမဟုတျဘူးနျော “ ရိုးရိုး ခေါကျမုနျ့လေး ” ။ အဲ့ဒီနညေ့မှာပဲ ကြှနျမကို မုနျ့ဝယျကြှေးတဲ့ အနျတီကွီးက မနကျကွတော့ ပွောပွတယျ ။
သူလညျးသရဲခွောကျခံရတယျတဲ့ ။ သူကကြှနျမထကျဆိုးတယျ သူကကွမျးခငျးမှာအိပျတာလေ သူအိပျတဲ့ခွရေငျးမှာ ပွော၇ရငျ သူ့ခွထေောကျနားမှာပေါ့ “ ဒေါကျ …. ဒေါကျ …. ဒေါကျ ” နဲ့ အသံတှကွေားလို့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာ ……….
“ သူ့ခွထေောကျနားမှာ ဘောလုံးလို အလုံးလေး သေးသေးလေးတဲ့ သခြောမကျြလုံးပှတျပွီးကွညျ့တော့ လူခေါငျးကွီးတဲ့ ဆံပငျကော မကျြနှာကောပါတဲ့
ခေါငျးသေးသေးလေး လှိမျ့နတော တဲ့ ”
သူ့မှာ တဈညလုံး မအိပျရဲဘူးတဲ့ မကျြလုံးကွီးမှိတျပွီး ဘုရားစာတှရှေတျ ၊ အျောလညျးမအျောရဲ ၊ အိပျယာထဲ (ကနျတော့ပါ) ရှူ ရှူးပါ ထှကျကကြုနျတယျတဲ့ ၊ ကြှနျမလိုပဲ နံနကျ ( ၄ နာရီ ) လောကျမှာ အသံတိတျသှားလို့ကွညျ့လိုကျတော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့ ။
လူကို ဘာမြှ အန်တရယျမပွုသှားတာ ဘုရားစာရဲ့ တနျခိုတျောကွောငျ့ဖွဈပါလိမျ့မယျ ၊ ဒါကကြှနျမ ယုံကွညျခကျြပါ ။ အဲ့နကေ့စပွီး ညဆို ဘယျသူကြှေးကြှေး ဘာအစားအသောကျမှ မစားတော့ဘူး ၊ အိမျလညျး မသယျလာရဲတော့ဘူး ။
ဒီစာကိုဖတျနတေဲ့သူ အခုအိပျပွီးဖတျနတောဆိုရငျ ခွရေငျးကိုမကွညျ့ပါနဲ့ ဘေးကိုမကွညျ့ပါနဲ့ စောငျကိုသခြောခွုံအိပျ အအေးမိမှာစိုးလို့ပါ 😛
ကွောကျတကျတယျဆို ညစဉျ မတ်ေတာပို့ ၊ ဘုရားဝတျပွု ၊ အမြှအတနျးပေးဝပွေီးမှအိပျကွပါ ။
အခြိနျဘယျလောကျမှမပေးရပါဘူး ကုသိုလျလညျးရ အန်တာရယျလညျးကငျးပါတယျ ။
အားလုံး ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ ခငျဗြာ ။
Previous: အစိုးရ သက်တမ်း ၂နှစ် အတွင်း အိမ်ခြံမြေ ထိန်းခဲ့၍ စီးပွားရေး စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးလာဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
Next: ပျော်ရွှင်ဖွယ် မြန်မာနှစ်သစ် သင်္ကြန် အချိန်အခါလေး ရောက်လို့ လာပါတော့မယ်နော်☺️